Caadooyinka '5' si loo daaweeyo kaadi-mareenka kaadida - Hagaajinta Caafimaadkaaga - TELES RELAY
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah Caadooyinka '5' ee lagu daaweeyo kaadida kaadida - Kordhin Caafimaadkaaga
Kaadida kaadi-celis la'aanta jirka waxaa loola jeedaa khasaarin la'aanta kaadida. Maqnaanshahan waxay noqon kartaa mid yar, marka kaadida kaadidu yar tahay, ama mid halis ah, marka kaadiheystu si buuxda u faaruqiso.
Cillad la'aanta kaadida iyo kaadi-xannibmadu maahan mid nafsiyan ah: taasi waa calaamad. Waxaa jira sababo badan oo sababi kara kaadida kaadida kaadida.
Baxsiga kaadida ayaa noqon kara mid deg deg ah oo dhici kara marka uu bukaanku qufaco, hindhiso, ama murugo. Qaar ka mid ah bukaanada waxay yeeshaan nooc halis ah oo calaamadahan ah, xitaa ha helin wakhti ay ku gaaraan musqusha sababtoo ah rabashadu waa degdeg.
Inkasta oo daaweyntu ay kala duwan tahay iyadoo ku xiran sababaha asaasiga ah ee calaamaddan, tallaabooyin aasaasi ah ayaa naga caawin kara inaan xakameyno. Dhammaan bukaanada waxay ku dhaqmi karaan caadooyinka sahlan ee soo socda si loo daaweeyo kaadisnaan la'aanta kaadida. Waxaa jira shan ka mid ah.
1. Beddel caadooyinkaaga cuntada
Mid ka mid ah furayaasha lagu daaweynayo kaadida kaadida kaadida ayaa sii wanaajinaya cuntadaada.
Dad badan oo naga mid ah ma yaqaanno waxyaabahaan soo socda: cunista cuntooyinka qaarkood sida cuntooyinka cayayaanka ah ama macaan Kordhinta dareenka kaadida. Cunto badan oo cuncun leh ayaa sidaas darteed saameyn xun ku yeelan karta xaaladdan.
Haddii ay dhacdo in kaadida kaadida kaadida, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo ama xitaa laga tirtiro cayayaanka, acidic iyo cuntooyinka macaan ee cuntadooda. Waxaa sidoo kale ugu wanaagsan in laga fogaado qaxwada iyo ilaha wax laga cuno kafeyn.
Maqaalkan ayaa sidoo kale laga yaabaa in aad xiisaynayso: 11 muhiimka ah ee cuntooyinka anti-bararka
2. Dib-u-baro kaadiheystaada
Dib u dayactirka kaadi wuxuu isku daraa farsamooyinka fudud si loo xoojiyo muruqyada looga baahan yahay kaadida. Hadafku waa in la sameeyo saacado go'an si loogu faaruqiyo kaadiheysta.
Talaabada koowaad waa markaa barnaamijka musqulaha ee musqulaha wakhtiyada go'an. Ujeedadu waa in la ilaaliyo rabitaanka kaadida inta ugu badan ee suurtogalka ah, illaa inta jidhku u isticmaalo in la nadiifiyo kaadida wakhtiyo go'an.
Dabcan, waxaa lagama maarmaan ah in aad si tartiib ah u qaadato: saacad kasta, kadibna laba saacadood kasta, illaa afar saacadood oo aan lahayn dufan.
Waxaa jira farsamo kale oo fudud oo kor u qaadi kara awooda lagu hayo kaadida. Farsamadani waxay ku lug leedahay wax yar ka dib markaad kaadidid markaad dareentid inaad kaadidid. Marka ugu horeysa, mid waa in uu xasuusto rabitaankiisu inuu kaadido shan daqiiqo, ka dibna toban daqiiqo ... Si ka sii fiican u kontoroolka kaadiheysta.
3. Samee jimicsi si aad u xoojiso sagxadda miskaha
Jimicsiyada lagu xoojinayo dabaqa sagxada miskaha waa tallaabo aad u fiican oo lagu daaweyn karo kaadi haynta kaadida. Farsamooyinka layliyadan waa guud ahaan daaweynta ugu horeysa ee la soo jeediyey marka kaadida kaadida ay tahay mid khafiif ah.
Jimicsiyada ugu caansan waa tan Jimicsiga Kegel. Maalin kasta waad ku tababaran kartaa raaxada gurigaaga.
Waxa aad u baahan tahay inaad sameyso
Marka hore, qandaraaska oo nasi muruqyada sagxada miskaha shan ilaa toban ilbiriqsi. Kadib, nasasho isla mudadaas. Muruqyada sagxada miskaha ayaa ah kuwa aad isticmaashid si aad u joojiso socodka kaadida ee dhexda ku jirta kaadida. Haddii aadan hubin sida loo sameeyo tan, isku day inaad joojiso socodka kaadida inta aad ku jirtid musqusha.
Jimicsiyada kale sida buundada ama kor u qaadista miskaha ayaa noqon kara caawinaad weyn. Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan in la hubiyo in la gooyo muruqyada wanaagsan.
4. Ka fogow sigaarka
Isticmaalka tubaakada waxaa laga yaabaa in ay waxyeeli karto hawlaha dareemaha ee kaadiheysta. Marka la eego heerarka sarreeya ee waxyaalaha sunta ah ee tubaakada, sigaarcabka ayaa wiiqi kara muruqyada sagxada miskaha.
Si gaar ah, Saameynta nicotinku waxay sababi kartaa qanjirada xad-dhaafka ah ee kaadiheysta, taas oo keeneysa in si deg-deg ah looga hortago kaadida.
Intaa waxaa dheer, waa in maskaxda lagu hayaa in sigaar-cabiddu ay horseedi karto dhibaato qufac joogto ah, taasoo kor u qaadeysa kaadida kaadida. Marka aan qufacno, cadaadiska caloosha ee lafaha miskaha ayaa kordha, taas oo soo saarta dhuunta kaadiheysta iyo kaadiheysta.
5. Sii khamriga
Cabitaanka khamriga ayaa saameyn taban ku leh kaadida: waxay hoos u dhigayaan derbiyada habka kaadida. Isticmaalka xad-dhaafka ah ee cabitaanka khamriga ayaa sidaas daraaddeed si hoose ula xiriiraya daciifinta derbiyada kaadiheysta, kaadiheysta iyo kelyaha.
Khamriga ayaa ka sii daraya kaadiheysta wuxuuna hoos u dhigayaa awooda lagu hayo kaadida. Intaa waxaa dheer, noqoshadeeda, khamrigu wuxuu kordhiyaa khatarta ahinfekshinka kaadida.
Sidaa darteed, marka ay timaado daaweynta kaadida kaadida kaadida, waxa habboon in la iska daayo khamriga iyo kordhinta qaadashada biyaha.
Layligani wuxuu sidoo kale xiisayn karaa adiga: Muxuu yahay midabka kaadidaada ee ku saabsan caafimaadkaaga
Waxaan dooneynaa inaan halkan ku adkeyno muhiimada ay leedahay la-talinta dhaqtarka haddii ay dhacdo in uu kaadida kaadida kaadida. Isla markiiba waxaad heleysaa baaritaan iyo daaweyn, ka sii wanaagsan ee saadaashu waxay noqon doontaa.
5 Xeeladaha dabiiciga ah ee loo yaqaan "Burns Burns" Markaad kaadidaato
Thanks to saamaynta alkaline, bicarbonate waxay kor u qaadaysaa joojinta bakteeriyada iyo xasilinta gubashada markaad kaadidid. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/5-habitudes-pour-soigner-lincontinence-urinaire/
Daawooyinka Dhirta ee 5 ee Daaweynta Daawada Caadada - Kordhinta Caafimaadkaaga